Lake House Farm, yabucala 2 hektare kumzila ibhayisekile.
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguTed
Ibekwe ngokukodwa kuzo zombini iCannon Lake kunye neSakatah Singing Hills State trail. Le ndlu yechibi labucala inohlaziyo oluninzi lwangoku kodwa umlinganiswa oyimbali. Ungawonwabela umtsalane wokuhlala kwifama engasebenziyo kunye neenyawo ezili-150 elunxwemeni lwechibi. ICannon Lake lelona chibi likhulu eRice County malunga neehektare ezingama-1600. IFaribault kunye nengingqi engqongileyo ineendawo zokutyela ezininzi ezintle, iivenkile, iipaki kunye namachibi ali-10 ngaphezulu kumgama oziikhilomitha ezili-10. Le yindawo efanelekileyo yokufumana usapho okanye abahlobo.
Le ndlu yechibi esanda kulungiswa eneminyaka eyi-100 enoyilo lwefama yanamhlanje ineefestile ezimnyama, imigangatho yomthi oqinileyo, kunye nembono yechibi phantse kuwo onke amagumbi. Ikhitshi, igumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlala linomgangatho ovulekileyo wengqikelelo efanelekileyo kubahlobo okanye ulonwabo losapho. Yothuswa ngomgangatho okhethekileyo oneendonga zamaplanga zenkulungwane endala kunye neenkcukacha ezininzi zefama yakudala. Iyadi enkulu kakhulu ilungele imidlalo yeyadi okanye ukuphumla ngasechibini. Qeda usuku lwakho ngokutshona kwelanga okuhle phezu kwamanzi ukusuka edokhini okanye kumlilo wenkampu.
Ukuba uyakonwabela ukuhlala echibini okanye iindlela zebhayisekile ezigangathiweyo, uya kuyonwabela le ndlu yechibi yobugcisa. Ichibi likulungele ukuloba, ukukhwela iipontoon ezinde okanye ukukhwela inqanawa. Umzila webhayisekile ugaywe ukusuka eFaribault ukuya kutsho eMankato kwaye uyoyikeka xa uhamba uhambo olude, ukukhwela ibhayisekile, ukubaleka, okanye nokuhamba ngekhephu ebusika. Isitalato yindlela ezolileyo nenabantu abambalwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Ted
Sihlala kufutshane kwaye siya kufumaneka ngexesha lokuhlala kwakho ukuphendula imibuzo okanye ukunika iingcebiso ngezinto omawuzenze. Sikwanayo nesibophelelo kwindawo enazo zonke iindawo ezinomtsalane zalapha.